Esikhathini sobudala, ukuqoqa idatha mayelana nokuziphatha-owenza lokho, futhi nini-kubiza kakhulu, ngakho-ke akuvamile. Manje, eminyakeni yobudala, ukuziphatha kwezigidigidi zabantu kubhaliwe, kugcinwe futhi kuhlaziywa. Isibonelo, njalo uma uchofoza kuwebhusayithi, shayela ifoni yakho ephathekayo, noma ukhokhe okuthile ngekhadi lakho lesikweletu, irekhodi le-digital lokuziphatha kwakho lidalwe futhi ligcinwe ibhizinisi. Ngenxa yokuthi lezi zinhlobo zedatha ziwumphumela wezenzo zabantu zansuku zonke, zivame ukubizwa ngokuthi i- digital traces . Ngaphandle kwalezi zimpawu eziqhutshwa amabhizinisi, ohulumeni banalo idatha ecebile kakhulu ngokubili ngabantu namabhizinisi. Ngokubili la marekhodi ebhizinisi kanye nohulumeni ngokuvamile abizwa ngokuthi idatha enkulu .
Umkhukhula okhulayo wezibalo ezinkulu kusho ukuthi sithuthele ezweni lapho idatha yokuziphatha yayingekho ezweni lapho idatha yokuziphatha iningi khona. Isinyathelo sokuqala sokufunda kusuka kumininingwane enkulu siqaphela ukuthi siyingxenye yesigaba esibanzi sedatha esetshenziselwe ucwaningo lwezenhlalo iminyaka eminingi: idatha yokubuka . Okungenani, idatha yokubuka yinoma iyiphi idatha ephumela ekuqapheliseni uhlelo lwezenhlalakahle ngaphandle kokungenelela ngandlela-thile. Indlela engafanele yokucabanga ngayo ukuthi idatha yokubheka konke okungahileleki ukukhuluma nabantu (isib. Ukuhlola, isihloko sesahluko 3) noma ukushintsha izindawo zabantu (isib., Ukuhlolwa, isihloko sesahluko 4). Ngakho-ke, ngaphezu kwamarekhodi ebhizinisi kanye nohulumeni, idatha yokubuka ihlanganisa izinto ezifana nombhalo wephephandaba nezithombe ze-satellite.
Lesi sahluko sinezingxenye ezintathu. Okokuqala, esigabeni 2.2, ngichaza imithombo emikhulu yedatha ngokuningiliziwe futhi ngichaze umehluko oyinhloko phakathi kwabo kanye nedatha eye isetshenziselwa ucwaningo lwezenhlalakahle esikhathini esidlule. Khona-ke, esigabeni 2.3, ngichaza izici eziyishumi ezivamile zemithombo enkulu yedatha. Ukuqonda lezi zici kukuvumela ukuba uqaphele ngokushesha amandla kanye nobuthakathaka bemithombo ekhona futhi kuzokusiza ukuba uhlanganise imithombo emisha ezoba khona esikhathini esizayo. Ekugcineni, esigabeni 2.4, ngichaza amasu amathathu okucwaninga okuyinhloko ongayisebenzisa ukuze ufunde kusuka ekuboneni idatha: ukubala izinto, ukubikezela izinto, nokulinganisa ukuhlolwa.